ဆိုလာလေယာဉ်နဲ့ ပထမဆုံး လေထီးခုန်သူ
ဒီတပတ်တော့ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံမှာ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်နဲ့ အမြင့်ပေ ၅၀၀၀ လောက်ကနေ ပထမဆုံး အောင်အောင်မြင်မြင် လေထီးခုန်နိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြမှာပါ။
၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် အင်္ဂါနေ့က ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ Payerne လေတပ်အခြေစိုက် စခန်း ကနေ
ပထမဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာလေယာဉ်နဲ့ လေထီးခုန်တာကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေသူတွေဟာ အမြင့်ပေ ၅၀၀၀ လောက် (မီတာ ၁၅၂၀) မှာ ပျံသန်းနေတဲ့ SolarStratos လေယာဉ် ပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းလာတဲ့ လေထီးခုန်သမားကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
"ဒါဟာ လေကြောင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး နေစွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်ကနေ အောင်အောင်မြင်မြင် လေထီးခုန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ် တဦးက ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့. ပြောသွားတာပါ။.
လေထီးခုန်သမားက ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံသား ရာဖေး ဒွမ်ဂျန် Raphael Domjan ပါ။ သူဟာ SolarStratos ဆိုလာလေယာဉ် စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး တွဲဘက် လေယာဉ်မှုး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
"ပထမဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီးထဲမှာ ဒီကနေ့အောင်မြင်မှုက နေစွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်ပျံထဲကနေ ပထမဆုံးခုန်ချနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဝေဟင်အမြင့်ခုန် အားကစားနည်း အတွက် အပြောင်းအလဲ တွေကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။”
သူက နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်လို သန့်ရှင်းတဲ့ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကို ဝေဟင် အမြင့်ခုန်တာ အပါအဝင် အားကစားနည်း မျိုးစုံမှာ သုံးဖို့ ကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတာ အများ သိလာစေဖို့ပါ ရည်ရွယ်တာပါ။
“ ဒီလေယာဉ်က နေရောင်ခြည် ဆိုလာစွမ်းအားကို သုံးတာကြောင့် ပထမဆုံး ဆိုလာ skydive လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်မိုးပေါ်ကို ပျံတက်တဲ့အခါ လေယာဉ်ပျံက ဒီဆိုလာဆဲလ် တွေကရတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ပျံနေတာမို့ မိုးပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းချိန်မှာလည်း ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုပဲ သုံးတဲ့ သဘောပါ။”
သူ့လေယာဉ်ဟာ ၂၀၁၆ တုန်းက ကမ္ဘာကို အောင်အောင်မြင်မြင် တပတ်ပတ် နိုင်ခဲ့တဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Solar Impulse လေယာဉ် ပုံစံ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
ပထမဆုံး ဆိုလာလေယာဉ် Solar Impulse နဲ့ ကမ္ဘာတပတ် ပတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့သူကတော့
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Solar Impulse ဖေါင်ဒေးရှင်း က ဖြစ်ပါတယ်။ ကီလိုမီတာ ၄ သောင်း လောက် အကွာအဝေးကို ဓါတ်ဆီမသုံးပဲ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်ကို သုံးပြီး ပျံသန်းပြခဲ့တာပါ။
ဒီဖေါင်ဒေးရှင်းကို အဲဒီလေယာဉ် မောင်းတဲ့သူ တဦးဖြစ်တဲ့ Dr Bertrand Piccard က ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးပူးတွဲတည်ထောင်သူက သူနဲ့အတူ မောင်းနှင်ခဲ့သူ လေယာဉ်မှုး အန်ဒရေ ဘောရ်ှဘာဂ် Andre Borschberg ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေထဲက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ကမ္ဘာတလွှား တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနိုင်မယ့် ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး တီထွင်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Solar Impulse လေယာဉ် လို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတဲ့ SolarStratos လေယာဉ်ဟာ ၂ ယောက်စီး လေယာဉ် ဖြစ်ပြီးပေ ၈၀ ကျော် ရှည်တဲ့ အတောင်ပံမှာ Photovoltaic ဘက်ထရီတွေ စီထားတာပါ။ ဒီဘက်ထရီတွေကို နေရောင်ခြည် ကနေ ထုတ်ယူတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ အားပြန်ဖြည့်ပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါမှာ နေထိုင်တဲ့ စပိန်က မိဂဲလ် Miguel Iturmendi အိတူရ် မန်းဒီး က မောင်းနှင်တာ ဖြစ်ပြီး Raphael Domjan ကတော တွဲဖက်လေယာဉ်မှုး တာဝန်လည်း ယူပါတယ်။ လေယာဉ်က ဆွစ်ဇလန် အနောက်ပိုင်းက ကောင်းကင်ယံ -ပေ ၅၀၀၀ လောက် အမြင့်ကနေ ပျံသန်းနေချိန်မှာDomjan က ခုန်ဆင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူခုန်ဆင်းချိန်က လေယာဉ်ဟာ တနာရီကို မိုင်တရာနှုန်း နီးပါး (၁၅၀ ကီလိုမီတာ) နဲ့ ပျံသန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
"လေယာဉ် အတောင်ပံပေါ်မှာ ကျနော်က ခြေထောက်နဲ့ အကြာကြီး ရပ်နေလို့ မရပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီလေယာဉ်ပျံက ဘယ်လို ဆက်ပျံမယ်ဆိုတာကို မသိလို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် လေယာဉ်ထဲကနေ အပြင်ကို ထွက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ သူ့ကို မကန်မိအောင် သတိထားပြီး အမြန်ခုန်ဆင်းရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ လေယာဉ်ထဲကထွက်ပြီးပြီးချင်း အလိုက်သင့် ခုန်ချရတာပါ။ ဒါက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါ။”
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပထမဆုံး ခုန်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလာပြားတွေ တပ်ထားတဲ့ အတောင်ပံပေါ် တက်ရပ်ချိန် ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်၊ သူတို့ စမ်းသပ်နေတဲ့ ဆိုလာလေယာဉ် ဘယ်လို တုန့်ပြန်နိုင်တယ် ဆိုတာကအစ သူတို့ မသိသေးတာတွေက အများကြီးပါ။
"တကယ်တော့ ဒါက ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တခုပါ။ကမ္ဘာမှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ သွားတဲ့ ဒုတိယမြောက် ၂ ယောက်စီး လေယာဉ် ပုံစံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခုခု မှားသွားဖို့ - ဖြစ်နိုင်ချေက သိပ်များပါတယ်။ ဆိုတော့ ကံကောင်းဖို့လည်း လိုတာပေါ့လေ။ ဆိုလိုတာက ရာသီဥတု ကောင်းဖို့တို့၊ လေယာဉ်ပျံ ဘာပြဿနာမှ မတက်ပဲ ရှောရှော ရှုရှု ဖြစ်ဖို့တို လို ကံကောင်းဖို့ပေါ့။”
သူတို့ ကံကောင်းပါတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ သာသာယာယာ ရှိခဲ့တာပါ။ လေယာဉ်ဟာလည်း သူတို့ ပရောဂျက် လုပ်နေတဲ့ Payerne က လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းနားမှာပဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ပြန်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့ ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်ကို လူတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးကြဖို့ကိုပါ ကြော်ငြာ ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပါ။
Skydiving လို ဝေဟင်အမြင့်ခုန် အားကစားနည်းတွေ အတွက် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာစေတဲ့ ဖန်လုံအိမ် ဓါတ်ငွေ့ မသုံးပဲ၊ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်သုံးတဲ့ လေယာဉ်တွေ သုံးပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း သူတို့က မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့က ၂၀၂၂ မှာ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်နဲ့ ကမ္ဘာ့လေထု အထက်လွှာ ဖြစ်တဲ့ stratosphere အလွှာရှိရာ ဝေဟင်အမြင့် ၁၂ မိုင်ခွဲ အထိ သွားနိုင်ဖို့ပါ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။
လေထုအထက်လွှာ ဖြစ်တဲ့ stratosphere အလွှာဟာ ကမ္ဘာကနေ အမြင့် အကွာအဝေး အားဖြင့် ၈ မိုင်ကနေ မိုင် ၃၀ ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထု စုစုပေါင်းရဲ့ လေးပုံတပုံ လောက်ကို နေရာယူထားတာ ဖြစ်ပြီး အိုဇုံးလွှာ ရာခိုင်နှုန်း ၉ ၀ လောက်ကို အဲဒီအလွှာ အပေါ်ပိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလေထု အထက်လွှာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ အိုဇုံးလွှာဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်က အပင်တွေ သတ္တဝါတွေအတွက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ နေကနေထွက်လာတဲ့ ရောင်ခြည်တွေကို ကာဆီးပေးထားတာကြောင့် အပင်တွေ သတ္တဝါတွေ ရှင်သန်ရေးမှာ သူက သိပ်ကို အရေးပါပါတယ်။
နေရောင်ခြည်ကနေ လာတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူတဲ့ အတွက်လည်း ဒီ stratosphere အလွှာမှာ အမြင့်ပိုင်း ရောက်လေ အပူချိန်က ပိုများလေ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီအလွှာထဲကို ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်နဲ့ ပျံသန်း သွားရောက်နိုင်ဖို့ အတွက် solarStratos အဖွဲ့က ကြိုးစားနေတာပါ။
"ဒီ ပရောဂျက်အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ stratosphere လို့ခေါ်တဲ့ အထက်လေထုထဲ ရောက်အောင် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံးယာဉ်နဲ့ ပထမဆုံး သွားနိုင်ဖို့ပါ။”
ဆိုလာလေယာဉ်ကနေ ပထမဆုံး လေထီးခုန်သူဖြစ်တဲ့ Raphael Domjan က ပြောသွားတာပါ။
ဒီတပတျတော့ ဆှဈဇလနျနိုငျငံမှာ ဆိုလာစှမျးအငျသုံး လယောဉျနဲ့ အမွငျ့ပေ ၅၀၀၀ လောကျကနေ ပထမဆုံး အောငျအောငျမွငျမွငျ လထေီးခုနျနိုငျခဲ့တဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွမှာပါ။
၂၀၂၀ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျ အင်ျဂါနကေ့ ဆှဈဇလနျနိုငျငံ Payerne လတေပျအခွစေိုကျ စခနျး ကနေ
ပထမဆုံး နရေောငျခွညျစှမျးအငျသုံး ဆိုလာလယောဉျနဲ့ လထေီးခုနျတာကို စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နသေူတှဟော အမွငျ့ပေ ၅၀၀၀ လောကျ (မီတာ ၁၅၂၀) မှာ ပြံသနျးနတေဲ့ SolarStratos လယောဉျ ပျေါကနေ ခုနျဆငျးလာတဲ့ လထေီးခုနျသမားကို ဝမျးမွောကျဝမျးသာ အားပေးခဲ့ကွပါတယျ။
"ဒါဟာ လကွေောငျးဆိုငျရာ သမိုငျးမှာ ပထမဆုံး နစှေမျးအငျသုံးလယောဉျကနေ အောငျအောငျမွငျမွငျ လထေီးခုနျဆငျးနိုငျခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး ပှဲကွညျ့ ပရိတျသတျ တဦးက ပွငျသဈဘာသာနဲ့. ပွောသှားတာပါ။.
လထေီးခုနျသမားက ဆှဈဇလနျနိုငျငံသား ရာဖေး ဒှမျဂနျြ Raphael Domjan ပါ။ သူဟာ SolarStratos ဆိုလာလယောဉျ စီမံကိနျးကို ဦးဆောငျသူဖွဈပွီး တှဲဘကျ လယောဉျမှုး လညျး ဖွဈပါတယျ။
"ပထမဆုံးအကွိမျအောငျမွငျတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီးထဲမှာ ဒီကနအေ့ောငျမွငျမှုက နစှေမျးအငျသုံး လယောဉျပြံထဲကနေ ပထမဆုံးခုနျခနြိုငျခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလုပျနိုငျတာကွောငျ့ ဝဟေငျအမွငျ့ခုနျ အားကစားနညျး အတှကျ အပွောငျးအလဲ တှကေို ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။”
သူက နရေောငျခွညျ စှမျးအငျလို သနျ့ရှငျးတဲ့ ပွနျပွညျ့မွဲစှမျးအငျကို ဝဟေငျ အမွငျ့ခုနျတာ အပါအဝငျ အားကစားနညျး မြိုးစုံမှာ သုံးဖို့ ကွိုးစားနိုငျတယျဆိုတာ အမြား သိလာစဖေို့ပါ ရညျရှယျတာပါ။
“ ဒီလယောဉျက နရေောငျခွညျ ဆိုလာစှမျးအားကို သုံးတာကွောငျ့ ပထမဆုံး ဆိုလာ skydive လို့ ချေါနိုငျပါတယျ။ ကနြျောမိုးပျေါကို ပြံတကျတဲ့အခါ လယောဉျပြံက ဒီဆိုလာဆဲလျ တှကေရတဲ့ စှမျးအငျနဲ့ ပြံနတောမို့ မိုးပျေါကနေ ခုနျဆငျးခြိနျမှာလညျး ဆိုလာစှမျးအငျကိုပဲ သုံးတဲ့ သဘောပါ။”
သူ့လယောဉျဟာ ၂၀၁၆ တုနျးက ကမ်ဘာကို အောငျအောငျမွငျမွငျ တပတျပတျ နိုငျခဲ့တဲ့ နရေောငျခွညျစှမျးအငျသုံး Solar Impulse လယောဉျ ပုံစံ တညျဆောကျထားတာပါ။
ပထမဆုံး ဆိုလာလယောဉျ Solar Impulse နဲ့ ကမ်ဘာတပတျ ပတျနိုငျအောငျ ကွိုးစားခဲ့သူကတော့
ဆှဈဇလနျနိုငျငံ အခွစေိုကျ Solar Impulse ဖေါငျဒေးရှငျး က ဖွဈပါတယျ။ ကီလိုမီတာ ၄ သောငျး လောကျ အကှာအဝေးကို ဓါတျဆီမသုံးပဲ နရေောငျခွညျ စှမျးအငျကို သုံးပွီး ပြံသနျးပွခဲ့တာပါ။
ဒီဖေါငျဒေးရှငျးကို အဲဒီလယောဉျ မောငျးတဲ့သူ တဦးဖွဈတဲ့ Dr Bertrand Piccard က ထူထောငျခဲ့တာ ဖွဈပွီးပူးတှဲတညျထောငျသူက သူနဲ့အတူ မောငျးနှငျခဲ့သူ လယောဉျမှုး အနျဒရေ ဘောရျှဘာဂျ Andre Borschberg ဖွဈပါတယျ။သူတို့အဖှဲ့ဟာ ပွနျပွညျ့မွဲစှမျးအငျတှထေဲက နရေောငျခွညျစှမျးအငျကို ကမ်ဘာတလှား တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးနိုငျမယျ့ ဆိုလာစှမျးအငျသုံး တီထှငျမှုတှေ လုပျနတေဲ့ အဖှဲ့ ဖွဈပါတယျ။
Solar Impulse လယောဉျ လို နရေောငျခွညျစှမျးအငျသုံးတဲ့ SolarStratos လယောဉျဟာ ၂ ယောကျစီး လယောဉျ ဖွဈပွီးပေ ၈၀ ကြျော ရှညျတဲ့ အတောငျပံမှာ Photovoltaic ဘကျထရီတှေ စီထားတာပါ။ ဒီဘကျထရီတှကေို နရေောငျခွညျ ကနေ ထုတျယူတဲ့ စှမျးအငျနဲ့ အားပွနျဖွညျ့ပါတယျ။
ဒီလယောဉျကို အမရေိကနျနိုငျငံ ဖလျောရီဒါမှာ နထေိုငျတဲ့ စပိနျက မိဂဲလျ Miguel Iturmendi အိတူရျ မနျးဒီး က မောငျးနှငျတာ ဖွဈပွီး Raphael Domjan ကတော တှဲဖကျလယောဉျမှုး တာဝနျလညျး ယူပါတယျ။ လယောဉျက ဆှဈဇလနျ အနောကျပိုငျးက ကောငျးကငျယံ -ပေ ၅၀၀၀ လောကျ အမွငျ့ကနေ ပြံသနျးနခြေိနျမှာDomjan က ခုနျဆငျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူခုနျဆငျးခြိနျက လယောဉျဟာ တနာရီကို မိုငျတရာနှုနျး နီးပါး (၁၅၀ ကီလိုမီတာ) နဲ့ ပြံသနျးနတောဖွဈပါတယျ။
"လယောဉျ အတောငျပံပျေါမှာ ကနြျောက ခွထေောကျနဲ့ အကွာကွီး ရပျနလေို့ မရပါဘူး။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ဒီလယောဉျပြံက ဘယျလို ဆကျပြံမယျဆိုတာကို မသိလို့ပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ လယောဉျထဲကနေ အပွငျကို ထှကျလိုကျပွီးတာနဲ့ သူ့ကို မကနျမိအောငျ သတိထားပွီး အမွနျခုနျဆငျးရပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ လယောဉျထဲကထှကျပွီးပွီးခငျြး အလိုကျသငျ့ ခုနျခရြတာပါ။ ဒါက တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါ။”
ဟုတျပါတယျ။ ဒါဟာ ပထမဆုံး ခုနျခတြာဖွဈတဲ့အတှကျဆိုလာပွားတှေ တပျထားတဲ့ အတောငျပံပျေါ တကျရပျခြိနျ ဘာတှေ ဖွဈလာမယျ၊ သူတို့ စမျးသပျနတေဲ့ ဆိုလာလယောဉျ ဘယျလို တုနျ့ပွနျနိုငျတယျ ဆိုတာကအစ သူတို့ မသိသေးတာတှကေ အမြားကွီးပါ။
"တကယျတော့ ဒါက ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှု တခုပါ။ကမ်ဘာမှာ နရေောငျခွညျစှမျးအငျနဲ့ သှားတဲ့ ဒုတိယမွောကျ ၂ ယောကျစီး လယောဉျ ပုံစံလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တခုခု မှားသှားဖို့ - ဖွဈနိုငျခကြေ သိပျမြားပါတယျ။ ဆိုတော့ ကံကောငျးဖို့လညျး လိုတာပေါ့လေ။ ဆိုလိုတာက ရာသီဥတု ကောငျးဖို့တို့၊ လယောဉျပြံ ဘာပွဿနာမှ မတကျပဲ ရှောရှော ရှုရှု ဖွဈဖို့တို လို ကံကောငျးဖို့ပေါ့။”
သူတို့ ကံကောငျးပါတယျ။ ရာသီဥတုကလညျး အဆငျပွပွေနေဲ့ သာသာယာယာ ရှိခဲ့တာပါ။ လယောဉျဟာလညျး သူတို့ ပရောဂကျြ လုပျနတေဲ့ Payerne က လတေပျအခွစေိုကျစခနျးနားမှာပဲ အောငျအောငျမွငျမွငျ ပွနျဆငျးသကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူတို့ ဆန်ဒဖွဈတဲ့ ပွနျပွညျ့မွဲ စှမျးအငျကို လူတှေ တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးကွဖို့ကိုပါ ကွျောငွာ ပွီးသား ဖွဈသှားတာပါ။
Skydiving လို ဝဟေငျအမွငျ့ခုနျ အားကစားနညျးတှေ အတှကျ ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးလာစတေဲ့ ဖနျလုံအိမျ ဓါတျငှေ့ မသုံးပဲ၊ ပွနျပွညျ့မွဲစှမျးအငျသုံးတဲ့ လယောဉျတှေ သုံးပွီး အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာမယျလို့လညျး သူတို့က မေြျှာလငျ့ထားတာဖွဈပါတယျ။
သူတို့အဖှဲ့က ၂၀၂၂ မှာ ဆိုလာစှမျးအငျသုံး လယောဉျနဲ့ ကမ်ဘာ့လထေု အထကျလှာ ဖွဈတဲ့ stratosphere အလှာရှိရာ ဝဟေငျအမွငျ့ ၁၂ မိုငျခှဲ အထိ သှားနိုငျဖို့ပါ ရညျရှယျခကျြ ရှိပါတယျ။
လထေုအထကျလှာ ဖွဈတဲ့ stratosphere အလှာဟာ ကမ်ဘာကနေ အမွငျ့ အကှာအဝေး အားဖွငျ့ ၈ မိုငျကနေ မိုငျ ၃၀ ကွားမှာ ရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာ့လထေု စုစုပေါငျးရဲ့ လေးပုံတပုံ လောကျကို နရောယူထားတာ ဖွဈပွီး အိုဇုံးလှာ ရာခိုငျနှုနျး ၉ ၀ လောကျကို အဲဒီအလှာ အပျေါပိုငျးမှာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီလထေု အထကျလှာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ အိုဇုံးလှာဟာ ကမ်ဘာမွပေျေါက အပငျတှေ သတ်တဝါတှအေတှကျ အန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့ နကေနထှေကျလာတဲ့ ရောငျခွညျတှကေို ကာဆီးပေးထားတာကွောငျ့ အပငျတှေ သတ်တဝါတှေ ရှငျသနျရေးမှာ သူက သိပျကို အရေးပါပါတယျ။
နရေောငျခွညျကနေ လာတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျကို စုပျယူတဲ့ အတှကျလညျး ဒီ stratosphere အလှာမှာ အမွငျ့ပိုငျး ရောကျလေ အပူခြိနျက ပိုမြားလေ ဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ဒီအလှာထဲကို ဆိုလာစှမျးအငျသုံး လယောဉျနဲ့ ပြံသနျး သှားရောကျနိုငျဖို့ အတှကျ solarStratos အဖှဲ့က ကွိုးစားနတောပါ။
"ဒီ ပရောဂကျြအတှကျ ကနြျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကတော့ stratosphere လို့ချေါတဲ့ အထကျလထေုထဲ ရောကျအောငျ နရေောငျခွညျ စှမျးအငျသုံးယာဉျနဲ့ ပထမဆုံး သှားနိုငျဖို့ပါ။”
ဆိုလာလယောဉျကနေ ပထမဆုံး လထေီးခုနျသူဖွဈတဲ့ Raphael Domjan က ပွောသှားတာပါ။